Enterprise Chazvakanakira -. DongGuang BEC Technology CO, LTD
Tine shamwari dzakanaka dzakawanda uye vatengi kwenyika uyo nguva dzose aigona kupa isu vamwe pfungwa yakanaka chaizvo uye inofambiswa kuvandudza zvinhu zvedu zviri nani. Interiorly, tiri vamwe pamwe hwakanaka nevamwe pamasikiro makambani, The magadzirirwo Makambani nguva dzose aigona kugadzira kunze zvigadzirwa zvakanaka kwakakurumbira chaizvo pakati vatengi, Zvadaro chatichakumbira edu makuru R & D chikwata kutanga kuti kubuda zvakanaka dzakakurumbira zvigadzirwa.
Nokuti garandi, tingadai kuuya 6 mwedzi ... Good chikwata basa nguva dzose pano kubatsira vose vatengi kugadzirisa zvose dambudziko iri nguva.
Nokuti kukurukura nguva, isu tiine zvinhu zvakawanda kudanda, saka murayiro achava hurukuro mumazuva 3-5 painenge zvinoitika.